Wasiir Xaamud: waa loo dhan yahay ciidamadda Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Wasiir Xaamud: waa loo dhan yahay ciidamadda Soomaaliya
Wasiir Xaamud: waa loo dhan yahay ciidamadda Soomaaliya
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan, ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay wargeyska Xaqiiqa Times wuxuu faahfaahin kaga bixiyay hawlaha wasaaraddaasi gaar ahaan marka ay timaado dib u aas’aasida ciidanka xoogga dalka. Wuxuuna sheegay in markii ugu horreysay dhawr iyo 20 sanno kaddib ay ku guuleysatay wasaaraddiisu inay ka hawlgasho xaruntii gaashaandhiga oo dawladda Maraykanku ay gacan ka siisay dayactirkeeda.
Wasiirka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in horintii ugu horreysay oo kumaandoos Soomaali ah la unkay ayna diyaar u yihiin gudashada hawlahooda qaran, wuxuuna dhinaca kale rajo weyn ka muujiyay qaadista cunaqabataynta hubka ee saaran waddanka Soomaaliya.
Mar wax laga weydiiyay in ciidamadda Soomaaliya ay u badan yihiin qabiilo gaar ah ayuu beeniyey jiritaanka arrintaasi, isaga oo raaciyay in qabaa’ilada oo dhan ay joogaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sidaasna ciidamadda qaar looga qoray magaaladaasi oo imminka ay mushaar u siiyaan kummannaan askar ah oo u diwaan gashan wasaaradda difaaca dalka.
Wareysiga wasiirka oo faahfaahsan goordhaw ayaad kaga boggan doontaan Xaqiiqa Times haddii Alle idmo
Previous articleHawlgalka Badweynta Hindiya oo lagu qaaday Shabaab
Next articleGedo: biyihu waa 150,000 oo shilin fuustadii